Akanjo atin'akanjo → Akanjo fiasana • amboradara solosaina P&M matihanina
Akanjo thermoactive natokana indrindra ho an'ireo olona iharan'ny toe-javatra sarotra ivelany, toy ny maripana ambany, ny rivotra na ny drafts. Ny ankabeazan'ny volan'ny fivarotana dia atin'akanjo thermoactive: T-shirt, pataloha ary setroka. Ny atin'akanjo thermoactive dia natao mifanaraka amin'ny fenitra azo ampiharina.
Ny akanjo namboarina tamin'io fomba io dia miantoka ny fahalalahan'ny fivezivezena sy ny fiadanam-po tsaratsara kokoa. Noho ireo endri-javatra ireo dia tsy ampiasaina amin'ny asany ihany no ampiasana azy fa koa amin'ireo mpitia fanatanjahan-tena amin'ny ririnina. Ho fanampin'izany, ny vokatra atolotray dia azo jerena amin'ny vidin'ny fifaninanana noho ny habetsany izay andoavanay ny magazay. Ny fampifangaroana ny vidiny avo lenta sy manintona dia mahatonga ny atin'akanjo toy izany ho malaza tsy ho an'ny filana matihanina ihany fa ho an'ny tsy miankina.
Ny atin'akanjo thermoactive dia mifanaraka tsara amin'ny vatana
Akanjo thermoactive, andiana zipo sy pataloha
atin'akanjo malefaka be izy io, mifanentana tsara amin'ilay sary. Mahafinaritra tokoa ny mety aminy fa rehefa afaka kelikely anaovanao azy dia ajanonao intsony ny fahatsapanao azy. Ny fitaovana malefaka dia miantoka ny fahalalahan'ny fivezivezena, misoroka ny tahotra ny tsy mahazo aina. Na izany aza, ny lahasa lehibe indrindra amin'ny atin'akanjo toy izany dia ny fiarovana ny fahasalamana sy ny vatana amin'ny hafanana ambany sy ny fampangatsiahana ny vatana.
Ny atin'akanjo thermoactive dia nahazo ny mpiray tsikombakomba tamin'ireo mpitia fanatanjahantena sy mpandraharaha, ny fananany dia noraisina tsara, izay mampitombo ny lazany. Atambatra amin'ny akanjo hafa toa sweatshirts, pataloha na palitao mamela anao hifehy ny hafanan'ny vatana amin'ny fiovan'ny toe-javatra.
Andiana atin'akanjo thermoactive, mainty. PLN 38,69 grama
Fanesorana ny hamandoana mahomby
Akanjo thermoactive natao hampiasa ny haitao farany. Izy ireo no tompon'andraikitra amin'ny fampiononana miavaka indrindra. Noho ny fanesorana ny hamandoana amin'ireo sosona ivelany dia mety tsara amin'ny toe-javatra anehoan'ny mpampiasa fitomboan'ny fampihetseham-batana izany.
Ny hamandoana dia alefa any amin'ny sosona ivelany, izay misy lanjany lehibe raha misy fanatanjahan-tena mahery. Ny fivezivezena ny hamandoana araka ny tokony ho izy dia mampihena ny loza ateraky ny fofona manitra.
Ny fitazonana ny lamba rongony madio dia tena mora, tsy mila fomba manokana na mpiasa fanadiovana manokana, araho fotsiny ny fitsipika tsotra momba ny marika momba ny vokatra momba ny fanasana.
Akanjo thermoactive, pataloha Brubeck
atin'akanjo miasa amin'ny lehilahylamba rongonyatin'akanjo vehivavyfitafiana thermoactiveatin'akanjo miasa thermoactivelamba rongony mafanaakanjo anatiny thermoactive atin'akanjo